Abakhiqizi Bezifuyo Nezilwane | I-China Pet Comb Factory
Inja Yokuzilungisa Inja
Le khekhi lokulungisa inja linamazinyo ensimbi ajikelezayo angabamba kahle ingubo yangaphansi izosebenza ngokushelela ngoboya obunamathele ngaphandle kokugoqeka nokwenza isilwane sakho singakhululeki.
Izikhonkwane zaleli kamu lokuhlanza inja lenziwa ngemikhawulo eyindilinga ngakho-ke ngeke ilimaze noma iklwebhe isikhumba sesilwane sakho.
Okokusebenza kwalenkinga yokulungisa inja yi-TPR. Ithambe kakhulu. Kwenza ukuhlangana okuvamile kube lula futhi kukhululeke.
Iqedile ukusikwa imbobo ekugcineni okuphathwayo, amakamu okuzilungisa izinja nawo angaphanyekwa uma kufunwa.Kulungele izinhlobo zezinwele ezinde.
Ikati Lezikhunta Zekati
1.Izikhonkwane zaleli khekhe lezikhunta zenziwa ngemikhawulo eyindilinga ngakho-ke ngeke zilimaze noma ziklwebhe isikhumba sesilwane sakho.
I-2.Soft ergonomic anti-slip grip yaleli khekhe lekati yenza ukuhlangana okuvamile kube lula futhi kukhululeke.
3.Likama lekati elisusa ikati lisusa ngobunono izinwele ezixegayo, futhi lisuse imbandezelo, amafindo, amazenze, ukudonsa nokungcola okuvalelekile.Liphinde likhombise ukubhucungwa kwejazi elinempilo, likhuphule ukujikeleza kwegazi futhi lishiye izilwane zakho ezifuyile zithambile futhi ziyacwebezela.
4.Ukuqedelwa ukusika imbobo ekugcineni okuphathwayo, amakamu okugcoba ikati nawo angalengiswa uma kufiswa.
Ngokwezifiso Inja Yokuzilungisa
Ukuzilolonga Kwenja Ngokwezifiso kanye nokubhucungwa kwejazi elinempilo, Kukhulisa ukujikeleza kwegazi futhi kushiye ijazi lesilwane sakho lithambile futhi licwebezela. Ikama lethu liphelele ekuqedeni nasekubhebhetheni.
Amazinyo ensimbi angenansimbi angenasici anomphetho oyindilinga, ngeke asilimaze isilwane sakho. Amazinyo anciphile wezinwele ezinhle ezungeze amehlo wesilwane, izindlebe, impumulo, nezindawo zemilenze.Amazinyo abanzi ezinwele eziluhlaza emzimbeni omkhulu.
Isibambo se-ergonomic esinendawo engaroli engagxili, ukumbozwa kwekama lenja yokulungisa inja kuvimbela izingozi ezishelelayo ukukugcina uphephile nesilwane sakho.